အသက် ၄၅ နှစ် - PIED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ လ 45 အဘို့အ flatline ၌တည်၏။ အခုတော့နံနက်သစ်သားပြန်ရောက်လာပြီ။ ငါလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းအော်ဂင်စလုပ်နိုင်တယ်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အသက် ၄၅ နှစ် - PIED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ လ 45 အဘို့အ flatline ၌တည်၏။ အခုတော့နံနက်သစ်သားပြန်ရောက်လာပြီ။ ငါလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းအော်ဂင်စလုပ်နိုင်တယ်။
ယခုတွင်ငါသည်သင်တို့တွင်အချို့သော LOL ရှေးခေတ်စဉ်းစားမည်သည့် 45 ဖြစ်၏။ သို့သျောလညျးအကြှနျုပျသပုံပြင်နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုသင်ကအများစုအတှကျအကြိုးကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်! ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်မ (ထို့နောက်အသက်အရွယ် 21) အင်တာနက်များ၏အစောပိုင်းကလေးမွေးစားခြင်းတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုကာလအခါ usernet အုပ်စုများမှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ အဲဒီမှာ porn ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အဲဒီအချိန်ကငါ့အဘို့မကောင်းတဲ့အရာဖွစျသညျကိုအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူး။
နှစ်တွေငါတသမတ်တည်းကွန်ပျူတာကြည့် porn အပေါ်ဝေးလွန်းအချိန်နေခဲ့ရသည်။ နောက်ပိုင်းကေဘယ်လ်မှ DSL မှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတက်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ထိုကာလကျော်အဘယ်သူမျှမငါလုပ်နေတာဘာမဆိုစိတ်ကူးရှိသည်လိမ့်မယ်။ အဆက်မပြတ်စသည်တို့ကို, ဦးနှောက်မြူကြုံနေရ, ငါ့ cache ကိုရှင်းလင်းခြင်း, ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဖြစ်ခြင်းများအတွက်ဆင်ခြေအောင်
အစပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်သတိပြုမိသည့်တစ်ခုတည်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့လုံးဝအားထုတ်မှုမရှိဘဲအလွန်အမင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာထားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီနောက်အသက် ၄၀ လောက်မှာခက်ခဲတဲ့၊ လုံလောက်တဲ့အချိန်တွေစတာတွေစလာတယ်။ ဒီအချိန်အတွင်းငါဟာနာမငြိမ်တဲ့ခြေထောက်ရောဂါလက္ခဏာကိုလည်းတီထွင်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်ထဲတွင် dopamine အဆင့်နိမ့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ကန ဦး ၌ဤဆိုဒ်ကိုကျွန်ုပ်အားညွှန်ပြခဲ့သည်။ ငါ "porn စွဲနှင့်နာမငြိမ်ခြေထောက် (RLS)" googled ။ ထို့နောက်ငါရှာတွေ့နိုင်သမျှအကုန်ဖတ်ရန်နောက်လများစွာနေခဲ့ရသည်။ အဲဒီနောက်မှာငါစွဲနေတယ်ဆိုတာသိလာတယ် သူတို့ကစွဲလမ်းသူကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နောက်ဆုံးသောသူတို့ပြောကြသည်မဟုတ်လော ??
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးကိုပြုရရန် naturopath နှင့် MD သို့သွား၏။ ဦး နှောက်တွင် CT scan ဖတ်ခြင်း။ Neurotransmitter level နိမ့်သည် (သို့သော် RLS မှအိပ်စက်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်အလွယ်တကူရှင်းပြနိုင်သည်) ။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက RLS ကကျွန်မရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုအကန့်အသတ်မရှိတားဆီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ထိုနေ့သည်လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကဖြစ်သည်။ ကြက်ဆင်အအေးမိသွားပါတယ် ပထမလ (သို့) နှစ်လတွင်ကျွန်ုပ်၌တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်ငါ့အတွက်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကကျွန်ုပ်အားလမ်းလွဲသွားစေသည့်စိတ်နာကျင်မှုနှင့်စိတ်ပျက်စရာများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါ (အလိုဆန္ဒမရှိ) ကတည်းကငါ porn site ကိုဖူးဘူး။ ဒါဟာရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ညစ်ညမ်းမှုကိုငါကြည့်ရှုမယ်၊ ဒါပေမယ့် porno မဟုတ်ဘူး။ ငါကြုံတွေ့ရသောသက်ရောက်မှုများကိုသာအလေးထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၌ဆန္ဒမရှိပါ။
ကျွန်မအတိအကျ 23 months ago ဖြတ်။ ကျွန်မပထမဦးဆုံးအဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျွန်မနံနက်စိုက်ထူကြုံတွေ့မတိုင်မီ 1 တနှစ်နှင့်9လကာအလွန်ရှည်လျား Flat-line ကိုကာလကျင်းသွား၏။ ငါရိုးသားစွာငါကိုဖဲ့ထင်!
ငါ PMO'd နှစ်ဆယ်နီးပါး! ငါနှင့်အမြဲတမ်းအဖော်တစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးသော်လည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတကယ်ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။
ဒီ site ပေါ်တွင်အကြံပြုအဖြစ် Flat-line ကိုကာလအတွင်းကျွန်မမအောငျရန်စသည်တို့ကို, ငါ့ပုဂ္ဂလိက massaging ကြိုးစားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါသည်ငါ၏အဖော်နှင့်အတူလာသောအခါရင်းနှီးခြင်းနှင့်ယခုအချိန်တွင်အတွက်ဖြစ်ခြင်းများနှင့်အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုနေပုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်၏ခံစားချက်နှင့်အတွေးဖြစ်စဉ်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါကနည်းနည်းကူညီပေးခဲ့သည်။ သင်ဤအတူကူညီနိုင်သူလိင်ကုသ google နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်သို့သော်ကျွန်မအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူ ejaculate နိုင်ဘူး, တစ်နည်းနည်းကိုကူညီကိုပြု၏။ ဒါဟာနှစ်နှင့်နှစ်ပေါင်းခဲ့ ..
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါ PMO site ပေါ်တွင်ဗီတာမင် E ကိုမုန့်မဝယ်နှင့်ထိခိုက်လွယ်တိုးပွားလာ၏မျှော်လင့်ချက်၌ငါ့လိင်တံကလျှောက်ထားတဲ့အကြံပြုချက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သေမင်းလက်ချုပ်ကိုင်ထားသုံးပြီးနှင့်စူပါလျင်မြန်စွာငါ့ကို desensitized သူအပေါငျးတို့နှစ်ပေါင်း masterbating နဲ့နေသေးတယ်။ ငါသည်ငါ့ Flat-line ကိုလုံလောက်အောင်ရှည်လျားများအတွက်အပေါ်သှားကွောငျးကိုခံစားခဲ့ရနှင့်ဤ site ပေါ်တွင်လူအခြို့အချိန်ကြာမြင့်စွာပြီးနောက်ဟများထံသွားရောက်ကာဖို့ကြိုးစားနေအကြံပြုသည်။ ဒါနဲ့နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာစုံတွဲတစ်တွဲရက်သတ္တပတ်အဘို့အကြှနျုပျ၏လိင်တံ (ကိုယ့်ကိုအောက်တွင်အစွန်အဖျားနှင့်) မှ Vit E ကိုမုန့်လျှောက်ထားစတင်။
တစ်ဦးကရယ်စရာငါလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါနီးပါးပဲသူမ၏ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ပေါက်ကွဲခဲ့စူပါအထိခိုက်မခံခဲ့သည်။ ငါခံစားခြင်းနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ဤအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုငျသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုမထီမဲ့မြင်မပြုရန်ရှိသည်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာစုံတွဲတစ်တွဲထိုညဉ့်ကြိုးစားနေယူပေမယ့်ကောင်းမြတ်ခြင်းအော်ဂဇင်တစ်ခုရိုးသားခဲ့ !!
ငါဖြစ်သကဲ့သို့အဖြစ်ဘုန်းကြီးကျွန်မပိုပြီးသဘောအထောက်အထားမရှိဘဲဤ site ပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပေးရန်သွားမခံခဲ့ရ ..
လွန်ခဲ့သော ၂ လက အဲဒီအချိန်ကစပြီးမနက်တိုင်းထင်းခတွေခဏခဏရတယ်၊ နေ့တိုင်းတော့မဟုတ်ပေမယ့်အခုအသက် ၄၅ နှစ်ရှိပြီ။ ငါမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်တယ်။ ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာသွားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် ... ငါကခံစားပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်လုပ်ဖို့ပဲအာရုံစူးစိုက်လျှင် - ယခုအချိန်တွင်အတွက် - ငါအော်ဂဇင်နိုင်ပါတယ်။ ငါယခုတစ်လကျော်2ကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်လိင်ဆက်ဆံနှင့်အချိန်တိုင်း orgas! ငါသည်လည်းငါ၏ parnter ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်ချင်လျှင်ငါနှင့်မနောက်ပိုင်းတွင်သူမနှင့်အတူအော်ဂဇင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်!
ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းကိုဝါကြွားရန်မဟုတ်၊ အလားတူအခက်အခဲများကြုံတွေ့ရသူများအတွက်မျှော်လင့်ချက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ငါကဒီမှာထူးခြားတယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်၊ ငါအသက် ၂၀ ကျော်စကတည်းကအနှစ် ၂၀ နီးပါးစတင်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ဦး နှောက်ကf* cked ဖြစ်ဖို့လုံလောက်တယ်။ ငါအမြင်အာရုံ၊ ခံစားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အာရုံခံစားမှုတိုးပွားစေရန်ဗီတာမင်အီးခရင်မ်ကိုစတင်သုံးစွဲသည်အထိကျွန်ုပ်တို့ပြားချပ်ချပ် (၁ နှစ် ၉ လ) ရှိခဲ့သည်။
ငါနေဆဲကောင်းတဲ့ပြန်လုပ်အချို့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ငါဆေးမဝယ်တော့ဘူး (ဘယ်တော့မှမ) အခု ၂ လရှိပါပြီ၊ ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ငါ ၁၀၀% တစ်ကြိမ်စီအကြိမ်တိုင်းဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ခရီးစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သောအကြောင်းအရာများစွာကိုကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းသည်အပြင်ဘက်ရှိလူအချို့ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်မျှော်လင့်ပါသည်။ ရှည်လျားသောပို့စ်အတွက်ဝမ်းနည်းပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဒီမှာစာဖတ်နေစဉ်အသေးစိတ်များကိုပိုမိုသဘောပေါက်လိမ့်မည်။
ငါလူတိုင်းကိုဒီ site သို့ input ကိုပေးထားလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ငါ့ကိုကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။
LINK - ** 20 PMO'er မှအောင်မြင်သော reboot တစ်ခုအကောင့် **
BY - Rebooting101